राष्ट्रिय | BARDIYA ONLINE |
प्रेम बुढा/बर्दिया । रोजगारीका लागि विदेश हिँडेका १ सय ५० महिला भारतको बनारसमा ९ दिनदेखि बन्धक बनाइएको पाइएको छ । उनीहरु नथनियास्थित एउटा घरमा बन्धक बनाइएका हुन् । बन्धक बनाइएकामा बर्दियाका २ र अन्य पोखरा, ताप्लेजुङ लगायत पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाको रहेको बन्धकमा परेकी बर्दियाकी शारदा खड्काले बताईन् । भारत हुँदै अबैध बाटोमार्फत आषाढ २३ गते देखि कुबेत लगायत विभिन्न [पूरा पढ्नुहोस्]
डाक्टर के.सी.को समर्थनमा बर्दियामा जनप्रदर्शन
मिन अधिकारी/गुलरिया (बर्दिया) । जुम्लामा आमरण असनरत डाक्टर गोबिन्द के.सी.को समर्थनमा बर्दियामा जनप्रदर्शन भएको छ । स्वास्थ्य सेवा सरोकार समाज बर्दियाको नेतृत्वमा सदरमुकाम गुलरियामा जनप्रदर्शन भएको हो । – जनप्रदर्शन पछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वत्ताहरु । प्रदर्शनकारीहरुले जुलुस प्रदर्शनका साथ कोण सभा पनि गरेका छन् । कोण सभामा बोल्ने नागरिक वक्ताहरुले डाक्टर [पूरा पढ्नुहोस्]
डा. केसीको स्वास्थ्य तलमाथी भए जुम्ला लैजानेले जिम्मेवारी लिनु पर्छ : मन्त्री पोखरेल
प्रेम बुढा/बर्दिया । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द के.सी.को स्वास्थ्य तलमाथी भएमा जुम्ला लैजाने र अनसनको लागी व्यवस्था गर्छु भन्नेहरु नै जिम्मेवार हुने बताएका छन् । बारबर्दिया नगरपालिकालाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितता भएको नगर घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । कानुन शासनलाई कसैले [पूरा पढ्नुहोस्]
डिभी चिठ्ठाको नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस् नजिता
काठमाडौं । अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको डाइभर्सिटी भिसा (डिभी चिठ्ठा) को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकाको डिभी कार्यक्रम अन्तर्गत सन् २०१७, अक्टोवर १८ देखि नोभेम्भर २२ सम्म भरेको डिभी लोटरीको रिजल्ट मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । नतिजा हेर्न डिभी चिठ्ठा भर्दा पाएको नम्बर, थर र जन्ममिति उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। दूतावासले डिभी भरेकाहरुलाई आफ्नो रिजल्ट डिभीलोटरी डट स्टेट डट [पूरा पढ्नुहोस्]